Enweghị azịza gị na-ebibi Usoro Mgbasa Ozi Gị | Martech Zone
Ndi akwukwo na Azụ brik, ụlọ ọrụ na-enyere ndị ọkachamara aka na atụmatụ ha na-elekọta mmadụ, mkpanaka na dijitalụ etinyela aka na infographic a nke na-enye nghọta maka nnukwu nsogbu na mgbasa ozi mmekọrịta Ọtụtụ ụdị na-eche na ha na-enye ndị ahịa ọrụ ahịa na mgbasa ozi mmekọrịta mana eziokwu bụ na 92% nke ndị na-azụ ahịa ekwenyeghị!
Ouch. Anyị ekwuola ya na mbụ mana ọtụtụ ụlọ ọrụ na-ekpebi iji mgbasa ozi mmekọrịta maka azụmaahịa na enweghị usoro ọrụ ndị ahịa mepụtara. Ọ baghị uru etu atụmatụ mgbasa ozi mmekọrịta gị dịruru oke ukwuu mgbe ndị ahịa gị bidoro ịnụ olu maka enweghị azịza gị n'ilekọta nsogbu ha. Usoro ahia ọ bụla i chere ga-arụ ọrụ ugbu a emebiala ebe ọ bụ na ndị na-ege ntị na-ahụ naanị ọrụ ndị ahịa gị eme nzuzu.
N'ezie, agbara-ya bu ezi okwu. Ndị ụlọ ọrụ na-anabata ma na-arụ ọrụ ahụ nwere ike ịkwalite ekele nke ndị ahịa ha n'ịntanetị. Kedu nke i chere ga-emetụta mgbalị ị na-enweta?
Tags: ụdịbrik azụomume ogenzaghachiọrụ ndị ahịaelekọta mmadụ medianzaghachi mgbasa ozi
Nzute: Ngwa maka Nzuko Nzuko
Jun 10, 2014 na 9:02 nke ụtụtụ
Ezigbo post Doug !! Daalụ maka ịkekọrịta!